eHimalaya Online || News from nepal » यी ५ रंगहरु पूजा मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिन्छ, जान्नुहोस् उनीहरुको महत्व ।
यी ५ रंगहरु पूजा मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिन्छ, जान्नुहोस् उनीहरुको महत्व ।
२०७८ साउन १८ गते सोमबार ०१:३५
रंग हाम्रो जीवन मा ठूलो महत्व छ। हिन्दू धर्म मा, पूजा को समयमा ४ रंगहरु को विशेष महत्व छ, तर अन्य २ रंगहरु लाई पनि प्रयोग गरीन्छ। यो कसरी पंचरंगी पूजा गरिन्छ। आउनुहोस् यी ५ रंगहरुको महत्व जान्नुहोस्। ...
रंग हाम्रो जीवन मा ठूलो महत्व छ। हिन्दू धर्म मा, पूजा को समयमा ४ रंगहरु को विशेष महत्व छ, तर अन्य २ रंगहरु लाई पनि प्रयोग गरीन्छ। यो कसरी पंचरंगी पूजा गरिन्छ। आउनुहोस् यी ५ रंगहरुको महत्व जान्नुहोस्।
१. सेतो रंग: पुरातन समयमा, सेतो रंग यज्ञ वा महत्वपूर्ण पूजा को समयमा धेरै महत्वको थियो। पूजाको क्रममा सेतो धोती लगाएर बस्नुपर्छ। पूजाको क्रममा सेतो र कटनको कपासको कपडा पूजामा प्रयोग गरी प्याटमा राखिन्छ। पुरातन समयमा, दुलही सेतो रंग नै उपयोग प्रयोग गर्दथे। पिताम्बरी पटटामा सेतो अबीर पूजामा प्रयोग गरिन्थ्यो ।
२. पहेँलो रंग: पहेँलो रंग कुनै पनि शुभ काम वा पूजा मा धेरै प्रयोग गरिन्छ। हल्दी र चान्दन पूजा मा प्रयोग गरीन्छ जुन पहेंलो हो। पहेंलो र रगंको कपडा भगवान विष्णु र उनका अवतारहरु लाई लगाईन्छ। श्री कृष्णलाई पिताम्बर भनिन्छ।
३. रातो रंग: तपाइँ मा दुर्गा को मन्दिरहरुमा रातो रंग को अधिक देख्नुहुनेछ। कुमकुम वा कुंकु पूजा मा प्रयोग गरिन्छ जुन रातो रहन्छ। त्यहाँ रातो रंग को अबीर पनि छ। देवी दुर्गालाई रातो र हरियो चूडी प्रदान गरिन्छ। विवाहको समयमा, विवाहित महिला रातो रंगको साडी र हरियो चूडी लगाउँछन्। यस बाहेक, दुलहीले विवाहको समयमा रातो वा भगवा रंगको पगडी लगाउँछन्, जुन उनको जीवनको खुशी संग जोडिएको छ। माता लक्ष्मीलाई रातो रंग मनपर्छ। माता लक्ष्मी रातो कपडा लगाउँछिन् र एक रातो कमल मा शोभायमान हुन्छिन ।
४. सिन्दुरी रंग, भगवा वा भगवा रंग: भगवान हनुमान रातो र सिन्दूर रंग को शौकीन छन, त्यसैले भक्तहरु उहाँलाई सिन्दूर प्रस्ताव गर्छन्। सिन्दूर पनि गणेशलाई अर्पण गरिन्छ। हनुमानजी र गणेशजी को मूर्तिहरु सिन्दूर संग चित्रित हुन्छ्न् ।
५. हरियो रंग: यो रंग धेरै धेरै देवी पार्वती र भगवान शिव द्वारा मनपर्छ। यो रंग गणेश, माता दुर्गा र माता लक्ष्मीलाई पनि प्रिय छ। हरियो रंगको मेहंदी, चुनारिस र चूडी देवी दुर्गालाई चढाईन्छ। यो रंग को कपडा पूजा मा प्रयोग गरिन्छ। यस बाहेक, सुपारी, केराको पात, डब, आम पात को पूजा मा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ महिलाहरु को मेकअप मा यो रंग को एक अधिक हुन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ साउन १८ गते सोमबार ०१:३५